Ku darista Sawirka FSX
Ku darista Sawirka FSX 1 sano 10 bilood ka hor #1185
FSX Dahab, Boxed
Ka dib markii aan kor u qaaday daaqadaha 8.1, ugu dambeyntii waxaan awoodey in aan xiro MSFS X. Si kastaba ha noqotee waxaan dhibaato ku qabaa rarida add-on faylalka muuqaalka. Markii aan ordayay FSX daaqadaha XP ka hooseeya, wax dhibaato ah kumaan qabin raritaanka iyo isticmaalka add-on faylalka muuqaalka. Laakiin ka dib markii lagu xardho daaqadaha 8.1 waxyaabo uma muuqdaan inay sidoo kale shaqeynayaan, tusaale ahaan, Tyler Newport's "Fly Delta Jets" waxay ku taal calaamadda TOC ee ATL. Waan u xirmay si la mid ah sidii hore laakiin ma muuqato. Ma jiraan isbeddelo sida wax loo qabto haddii FSX ku jiraa 8.1? Miyuu "Boxed, Daabacaha Dahabka" ubaahan yahay adeegaha "1 & 2"? Caawinaad kasta waa mahadsan tahay.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Niells618
Ku darista Sawirka FSX 1 sano 10 bilood ka hor #1188
FSX Dahab Dahab ah waa FSX Deluxe, PLUS dardargelinta Add-on Xidhmo. Ma wadi kartid xawaaraha add-on xirxiro haddii aadan horeyba kuugu xirmin baakadaha adeegga.
Wax walba waxay ku socdaan isla meesha ay had iyo jeer sameyso, iyada oo aan loo eegin waxa OS aad leedahay.
Ku darista Sawirka FSX 1 sano 10 bilood ka hor #1190
Aad ayaad u mahadsantahay. Way fiicantahay in la ogaado in aan u baahnayn SP 1 & 2.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.186